Kutheni le ntokazi ibinzima ukulala - ii-Geofumadas
Kutheni le ntokazi ibinzima ukulala
Matshi, 2011 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
NgoMvulo, abo kananjalo bafuna ukubeka amantshontsho. Kwaye ukuqaphela ukukhalipha yintoni gif yoopopayi esinokuzenza nje kb 836 128 kunye iibhola kwindawo nganye, 64 16 ikota nganye kwaye rhoqo kwisithuba 32 imizuzwana.
Nangona abanye abahlobo bamfumene enye indawo kwaye bafana naye kwiihlaya ezimbi ezijikelezayo kwiwebhu, abafani ngesini okanye ababesini ngokwesini kodwa baxazulula kwiqhwa kwikhobe yekhofi.
nobuchopho A mfazi isebenza ngendlela eyahlukileyo, ungenza izinto ezininzi ngexesha elinye, ibhola ngalinye ajikeleza kule grafu abo 512 imele ingcinga ethile ukuba abasetyhini engqondweni. Umsebenzi abantwana, ukuba albhamu kwiveki ezayo, iimpahla ezingcolileyo ngoLwesine, isidlo kunye nabahlobo ngoMgqibelo, umhla wokuzalwa intloko kwiveki ephelileyo, umsebenzi yeposi ye kwiyunivesiti inshorensi iya hit 9 am, izolo, namhlanje, kwiveki ezayo, ikhefu elandelayo ...
Le ndoda inemibhola engaphantsi yokucinga ngayo, nje isibini esinesibini esilungile.
Post edlulileyo«Edlulileyo Yintoni Entsha e AutoCAD 2012, Inxalenye Yokuqala
Post Next Guqula iifayile AutoCAD bulk / MicrostationOkulandelayo "
Omnye Uphendule "Kutheni umfazi onenkathazo yokulala"
Hahahahaha! Yinto nje ... UKUHLOLA kodwa UFUNCINATING!